Ity vokatra ity dia ilay menaka fanosotra, menaka manitra, vao avy namboarin'ny orinasanay mba hanazavana sy hanivanana ilay ranoka aorian'ny hatsiaka; izy io no fitaovana mety indrindra amin'ny ozinina fanaovana haingon-tarehy mba hanivana ny fanosotra sy menaka manitra. Ny fitaovan'ity vokatra ity dia vita amin'ny vy tsy metisy 304 na vy tsy misy fangarony 316L, ary ny paompy diaphragm pneumatika nohafarana avy any Etazonia no ampiasaina ho loharanon'ny tsindry ho an'ny filtration pression tsara. Ny fantsona mampifandray dia mandray ny fantsom-pantsaka voadio madio, ary ny endriny rehetra dia manana endrika fifandraisana fametrahana haingana, izay mety amin'ny fanapahana sy fanadiovana. Izy io dia miaraka amin'ny fonon'ny sivana microporous polypropylene, izay be mpampiasa amin'ny indostrian'ny kosmetika, sampana fikarohana siantifika, hopitaly, laboratoara ary singa hafa mba hanazavana sy hamonoana rano kely, na famakafakana mikraoba simika, izay mety sy azo antoka.
Ity karazana fitaovana ity dia manana tombony amin'ny fiasa mety, fampisehoana marin-toerana, firafitra matevina ary dian-tongotra kely.
Ity masinina ity dia novolavolaina ho an'ny fampifangaroana, alcolization, stablization, fanazavana ary ny filtration ny ranona amin'ny tsindry mahazatra sy ny maripana ambany. Izy io dia fitaovana tsara indrindra ho an'ny astringent, ranomanitra, rano folral ary vavony sns, amin'ny ozinina kosmetika. Mandritra izany fotoana izany dia azo ampiasaina amin'ny departemantan'ny fikarohana, hopitaly ary laboratoara ihany koa izy amin'ny fanesorana ny bakteria mazava sy ny sivana rano kely. Ny fantsona dia mifamatotra amin'ny endrika fampifandraisana haingana, izay mahafeno ny fitakian'ny fenitra GMP.
Indostrian'ny kosmetika: rano kosmetika, ranomanitra, esto
Indostrian'ny fivarotam-panafody: fanasana vava, ranon-bava, ranon-tsiranoka ary fampidirana isan-karazany
Indostrian'ny sakafo: alikaola, zava-pisotro sns.
1. tanky mangatsiaka fitehirizana hafanana vy sy fantsona coil;
2. Fitaovana mangatsiaka;
3. Rafitra fampifangaroana porofo mipoaka
4. Paompy diaphragm pneumatika anticorrosive;
5. Rafitra fanivanana;
6. Valve fasika fantsakan'ny fidiovana;
7. Rafitra fanaraha-maso herinaratra karazana famehezana;
8. Mpanohana miova vy.
Teknolojia sy toetra mampiavaka azy
1. Ny mari-pana faran'izay kely indrindra amin'ny rafitra fanala dia mety hahatratra -15 ℃
2. Natao ho an'ny filtration fanazavana sy fanasivanana ny vahaolana aqueous isan-karazany
3. Ho an'ny fanivanana ny vahaolana amin'ny laboratoara sy ny haino aman-jery kolontsaina bakteria
4. Ny filtration hafa toy ny toner, ranomanitra, solon'ny maso, vitamina, photoresist, sns.
Previous: Fantsom-pamokarana hafanana anatiny sy fametahana tombo-kase
Manaraka: Masinina tsy misy emulsifying emulsifying